Top 10 X-Diyaarad Freeware
10ka ugu kulul X-Diyaarad freeware downloads
X-Diyaarad 11.50+ Fairey Gannet 1.2 HOT
X-Diyaarad 11.50+ Fairey Gannet 1.2. Fairey Gannet waa diyaarad xamuul ah oo ay sido Ingriiska xilligii Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib. Waxaa loogu talagalay Royal Navy's Fleet Air Arm (FAA) oo ay soo saartay shirkadda Fairey Aviation Company. Waxay ahayd monoplane-baal-dhexe oo leh seddex-baaskiil hoostiisa iyo saddex shaqaale ah, iyo mashiin laba jibbaaran oo turboprop ah oo wada laba matoorro oo wareegaya. Gannet waxaa asal ahaan loo soo saaray si loo buuxiyo dagaalka laba-geesoodka ah ee FAA ee ka hortagga gujis-ka iyo shuruudaha shaqo-joojinta. Kadib waxaa loo habeeyay hawlgalada iyada oo loo adeegsanayo ka hortag elektaroonik ah iyo xamuul diyaaradeed oo xamuul ah. Afar nooc ayaa lagu soo daray Mega-Pack-kan oo leh qorshooyin rinji oo dheeri ah iyo astaamo animated ah sida matoorrada, fiilooyinka xakamaynta, gogosha, albaabbada bambo gacmeedka, radar radome iyo tailhook. Saameyn gaar ah ayaa waxaa ka mid ah qiiqa iyo sigaar cabista bilowga. Dukumeentiyada ayaa lagu daray. Waxaa qoray Vasco Ribeiro.
Wednesday, September 23 2020 22: 19
X-Plane SS Wareegyada Qaybaha 1.0 HOT
X-Diyaarad Wareegyada Qaybta SS 1.0. Wareegyo qaybsan oo shamiito rinji ah iyo rinji nus foosto ah, casaan iyo caddaan iyo dhammaan caddaan, kala duwanaansho cusub iyo mid duugoobay. Wareegyada la taaban karo waxay sidoo kale ku jiraan qaybo tilmaam tilmaam ah oo aad u habeyn karto sameynta qaabeyn kasta. Si aad u rakibto, furtid oo aad galiso galka SS_Segmented_Circles galkaaga muuqaalka muuqaalka ah. Waxaa qoray Sidney Schwartz.
Friday, October 11 2019 22: 40
X-Diyaarad 11.30+ Aerospatiale Gazelle 1.0.1
X-Diyaarad 11.30+ Gaaska Aerospatiale 1.0.1. The Aerospatiale Gazelle waa diyaarad helicopter ah oo shan kursi Faransiis ah, oo inta badan loo isticmaalo gaadiidka fudud, indha indheynta iyo waajibaadka weerarka fudud. In ka badan 50 sano tan iyo duulimaadkeedii ugu horreeyay weli waxaa jira in yar oo ka mid ah kuwa wali duulaya. Ma jiro nooc ka mid ah diyaaraddan oo shidan X-Diyaarad muddo dheer sidaa darteed waxaan moodayay inaan wax meesha dhigo. Waa xoogaa-dhaqso ah laakiin waxaan u maleynayaa inay leedahay awood. Haddii qofna uusan jeclayn wuxuu xor u yahay inuu beddelo oo u qaybiyo nuqulkiisa: waa rukhsad GPL / GNU. Qeybintaan xitaa waxaa kujira sheyga isha / feylasha (qaab AC3D ah) si tan looga caawiyo. Waxaa qoray John Bray.
Thursday, July 18 2019 23: 31
X-Diyaarad 11.30 AS-565 Panther
X-Diyaarad 11.30 AS-565 Bakhaar. Eurocopter AS565 Panther waa nooca militariga ee helicopter-ka mataanaha ah ee nooca Eurocopter AS365 Dauphin oo leh miisaan culus oo ujeedo badan leh. X-Diyaarad moodeelka waxaa ka mid ah laba nooc: Pedro iyo Panther lagu xuso. Labadan diyaaradood aad ayey isugu dhowyihiin dhanka qalabka: AS 365 F "Dauphin Pedro" oo saaran markabka xamuulka qaada "Charles de Gaulle" waxaa badiyaa loo xilsaaray badbaadinta badda howlgalka badbaadinta shaqaalaha. Markabka AS 565 SA "Panther" oo saaran markabka Cassard, Lafayette, iyo Forbin, wuxuu u heellan yahay dagaalka kahortaga guumaysiga iyo ilaalinta maraakiibta madaniga ama militariga ee ladagaalanka argagixisada. Diyaaradan ayaa siday u kala horreeyaan u qalabeeyay maraakiibta 35F iyo 36F ee Ciidanka Badda ee Faransiiska tan iyo 1990, sanadkii ay bilaabeen Aerospatiale Marignane. Waxaa sameeyay Bernard JUNIOT (Berju83), oo ay caawinaad ka heleen Pilot-xubno ka tirsan iyo RFN. Xidhiidhka soo dejintu wuxuu ku geynayaa barta horumarineed ee ay iyagu leeyihiin (xulo qoraalka hurdiga ah: "Panther AS565" si aad u soo dejiso).
Thursday, January 30 2020 23: 01
X-Diyaarad 11 Vought F4U-1 Corsair 2.0
X-Diyaarad 11 Vought F4U-1 Corsair 2.0. The Vought F4U Corsair waa diyaarad dagaal oo Mareykan ah oo aragtay adeegga ugu horreyn Dagaalkii Labaad ee Adduunka iyo Dagaalkii Kuuriya. The Corsair waxaa loo qaabeeyey loona shaqeeyey sidii diyaarado sideyaal ah, waxayna shaqo badan la gashay ciidamada badda ee Mareykanka dabayaaqadii 1944 iyo horraantii 1945. Waxay si dhakhso leh u noqotay mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan xambaara diyaaradaha dagaalka ee Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Laga soo bilaabo markabkii ugu horreeyay ee nooca loo yaqaan 'Navy US' ee 1940, iyo gaarsiintii ugu dambeysay ee 1953 ee Faransiiska, 12,571 F4U Corsairs ayaa lagu soo saaray 16 nooc oo kala duwan. Hawlgalkeedii soo saarida ee 1942-53 wuxuu ahaa kii ugu dheeraa dagaalyahan kasta oo Mareykan ah oo ku lugta leh bistoolad. Waxaa qoray Stephane Toledo.
Thursday, March 05 2020 17: 07
X-Diyaarad 11 TNT Xamuul Boeing 737-800F 1.0.1
X-Diyaarad 11 TNT Xamuul Boeing 737-800F 1.0.1. Kani waa rinji khiyaali ah oo ah diyaarad 737-800F "xamuul TNT" ah. Inkasta oo TNT ay isticmaasho 737-400F's, liisanka simmers-ka ayaa noo ogolaanaya inaan isticmaalno wixii la beddelay ee 737. Waxay qaadataa diiwaangelinta 400F ee OO-TNQ. Rinjiga mar labaad ayaa loogu talagalay asalka X-Diyaarad 11 737 800. Soo dejiso oo ka fur faylka. Dhig feylka aan furayn ee loo yaqaan "JDR Freighter TNT" X-Diyaarad 11 Diyaarad 737-800 galka liveries. Waxaa qoray James Lambe.
Monday, June 17 2019 00: 22
X-Diyaarad 11 RNAF Default KC-10 1.0
X-Diyaarad 11 RNAF Default KC-10 1.0. Tani waa culeyska Ciidanka Cirka ee Boqortooyada Netherlands ee loogu talagalay KC10-kii ugu dambeeyay. Nederland wali labo ayaa laga isticmaalaa (maalin maalmaha ka mid ah waxaa lagu badali doonaa markabka A330). Feeji oo dhig qaybta liveries ee ah kii ugu dambeeyay ee KC-10. Haddii galka liveries uusan joogin, si fudud hal abuur. Waxaa qoray Henk de Bruin.
Thursday, July 04 2019 23: 59
X-Diyaarad 11 Air Malta Boeing 737 1.0
X-Diyaarad 11 Diyaaradda Air Malta Boeing 737 1.0. Kani waa hawlgalkii Air Malta markii ugu dambaysay X-Diyaarad 11 Boeing B737. Diyaaraddu waxay siddaa diiwaangelinta 9H-ADI. Si fudud u fidi oo u dhig galka cusub ee la abuuray qaybta noolaha ee Boeing 737-800. Waxaa qoray Paul Mort.
Sunday, June 16 2019 23: 58
X-Diyaarad 11.30+ BAC TSR-2 2.1
X-Diyaarad 11.30+ BAC TSR-2 2.1. Shirkadda Diyaaradaha Ingiriiska ee loo yaqaan 'TSR2 Corporation' waxay ahayd shaqo joojin la joojiyey Dagaalkii Qaboobaa iyo diyaarad sahamin ah oo ay diyaaradda British Aircraft Corporation u soo diyaariyeen Royal Air Force dhammaadkii 1950-yadii iyo horraantii 1960-yadii. Kani waa laqabsashada Daniel Grimes shaqadii hore (ogolaansho), waana tusaale aad ufiican wixii uu gaadhay. Diyaaraddu waxay ku bilaabmaysaa qol 3D ah oo aan dhammaystirnayn, markaa fadlan isticmaal nooca 2D (Alt + W). Dukumiinti ku jira xirmada. Nooca 2.1: Soo dejiyayaal badan ayaa ku arki doona tan mid aad u adag in la duulo. Dhibaato culus ayaa jirtay. Waxaan khafiifiyay wiishashka oo hadda ah wiishash duulaya oo buuxa arintaasna waan hagaajiyay. By Ray Hill.
Wednesday, July 31 2019 02: 15
X-Diyaarad 11.32+ Airbus H120 Colibri 1.0.5
X-Diyaarad 11.32+ Airbus H120 Colibri 1.0.5. Eurocopter (hadda waa Airbus Helicopters) EC120 Colibri (Hummingbird) waa shan kursi, hal matoor, helikabtarka nalka fudud. Qaabkan waxaa loogu talagalay X-Diyaarad 11.32+ waxayna leedahay qaab faahfaahsan oo gudaha iyo dibedda ah (shan xabo oo lagu daray). Fadlan eeg dukumiintiyada lagu daray (PDF) wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan sida ugu wanaagsan ee qaabkan looga faa'iidi karo. Waxaa qoray John Bray.
Wednesday, July 17 2019 00: 19